Maitiro ekuisa iyo iPhone muDFU modhi, Apple maitiro - Zvimwe
apple logo yakanamatira pachiratidziri
iphone inofa pa60 muzana
sei ipad yangu isiri kubatana newifi yangu
tenderera uchitenderera mwedzi zvichireva
Maitiro ekuisa iyo iPhone muDFU modhi, Apple maitiro
DFU inomirira chidimbu chinonzi DFU chinomirira Mudziyo Firmware Kwidziridzo , ndiyo yakadzama mhando yekudzoreredza iwe yaunogona kuita pane iyo iPhone. Mukuru mutungamiri weApple akandidzidzisa maitiro ekuisa maPhones muDFU modhi, uye semuchina weApple, ndakazviita mazana enguva.
Zvakandishamisa, handisati ndamboona imwe chinyorwa chinotsanangura maitiro ekupinza DFU modhi nenzira yandakadzidziswa. Zvizhinji zvemashoko aripo ndeaya zvisizvo chete. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri chii chinonzi DFU modhi , iyo firmware inoshanda sei pane yako iPhone uye ini ndichakuratidza nhanho nhanho kudzoreredza yako iPhone neDFU modhi.
Kana iwe uchida kudzidza nekutarisa pane kuverenga (kuita zvese zvingakubatsire zvirinani), ini ndinokurudzira kuti utarise pane edu YouTube vhidhiyo yekuti ungapinda sei DFU modhi uye maitiro ekuita DFU kudzorera kune yako iPhone .
Zvaunoda kuziva usati watanga
Bhatani Rokutanga Iri bhatani rakatenderera pazasi pechidzitiro che iPhone yako.
Iyo bhatani rekumuka / kurara izita reApple rebhatani repadivi rinoshandiswa kubatidza yako iPhone.
Iwe uchazoda a timer kuverenga kusvika kumasekondi masere (kana iwe unogona kuzviita nepfungwa).
Kana uchikwanisa, tsigira yako iPhone ku iCloud , iTunes kana Tsvaga usati waisa yako iPhone muDFU modhi.
NEW - Macs anomhanya macOS Catalina 10.15 kana gare gare shandisa Finder kudzorera iPhones kubva kuDFU.
Maitiro ekuisa iyo iPhone muDFU modhi
Unganidza yako iPhone kune komputa yako uye vhura iTunes kana uine imwe Mac ine macOS Mojave 10.14 kana PC . Inovhura Tsvaga kana uine imwe Mac ine macOS Catalina 10.15 kana gare gare. Izvo hazvina basa kana yako iPhone iri kuvhura kana kudzima.
Dhinda uye ubatise Kurara / Wake bhatani uye iyo Bhatani bhatani (pane iyo iPhone 6s kana pasi) kana Vhoriyamu Pasi bhatani (pane iyo iPhone 7) pamwechete masekondi masere.
Mushure memasekonzi masere, buritsa Kurara / Wake bhatani asi ramba uchimanikidza bhatani repamba (pane iyo iPhone 6s kana pasi) kana vhoriyamu pasi bhatani (pane iyo iPhone 7) kusvikira yako iPhone yaonekwa muTunes kana Tsvaga.
Regedza bhatani repamba kana vhoriyamu pasi bhatani. Yako iPhone skrini ichave yakasviba zvachose kana iwe wakabudirira kupinda muDFU modhi. Kana zvisiri, edza zvakare kubva pakutanga.
Dzoserai iPhone yako uchishandisa iTunes kana Tsvaga.
Maitiro ekuisa iyo iPhone 8, 8 Plus kana iPhone X muDFU modhi
Mamwe mawebhusaiti mazhinji anotora enhema, anotsausa, kana akaomesesa matanho pavanokuudza maitiro ekudzoreredza yako iPhone 8, 8 Plus, kana X ine DFU modhi. Ivo vachakuudza kuti dzima yako iPhone kutanga, zvinova zvisina basa zvachose. IPhone yako haifanirwe kudzimwa isati yaiswa muDFU modhi.
Kana iwe uchida mavhidhiyo, tarisa yedu itsva YouTube vhidhiyo nezve kudzoreredza yako iPhone X, 8 kana 8 Plus neDFU modhi. Kana iwe uchida kuverenga nhanho, maitiro acho ari nyore kwazvo kupfuura zvazvinonzwika! Maitiro acho anotanga sesimba rekutangazve.
Kuti udzorere yako iPhone X, 8, kana 8 Plus neDFU modhi, kurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro bhatani, uye nekukurumidza pinda uye ubudise vhoriyamu pasi bhatani, uye wobva wadzvanya wobata padivi bhatani kudzamara iyo skrini yaenda nhema.
Kana iko iko skrini ikangoita nhema, tinya uye bata vhoriyamu pasi bhatani uchiramba uchidzvanya padivi bhatani.
Mushure memasekonzi mashanu, buritsa bhatani repadivi asi ramba wakabata vhoriyamu pasi bhatani kusvikira yako iPhone yaonekwa muTunes kana Finder
Kana ichingoonekwa muTunes kana Tsvaga, buritsa vhoriyamu bhatani. Uye gadzirira! Yako iPhone iri muDFU modhi.
Ongorora: Kana iyo Apple logo ikaonekwa pachiratidziri, iwe wakabata vhoriyamu pasi bhatani kwenguva refu. Tanga maitiro kubva pakutanga uye edza zvakare.
Maitiro ekuisa iyo iPhone XS, XS Max kana XR muDFU modhi
Matanho ekuisa iyo iPhone XS, XS Max, XR muDFU modhi yakafanana chaizvo nematanho eiyo iPhone 8, 8 Plus uye X. Tarisa vhidhiyo yedu yeYouTube nezve maitiro ekuisa iyo iPhone XS, XS Max kana XR muDFU modhi kana iwe uri wakanyanya kuona mudzidzi! Muvhidhiyo iyoyo takashandisa yangu iPhone XS kukutungamira nhanho imwe neimwe yemaitiro.
Maitiro ekuisa iyo iPhone 11, 11 Pro kana 11 Pro Max muDFU modhi
Unogona kuisa iPhone 11, 11 Pro, uye 11 Pro Max muDFU modhi nekutevera nhanho dzakafanana sezvaungaita kune iPhone 8 kana gare gare. Kutarisa vhidhiyo yedu yeYouTube kana iwe uchida rubatsiro kupedzisa maitiro.
Kana iwe uchida kutarisa vhidhiyo pane kuverenga ...
Kana iwe uchida kuona maitiro arikuita: tarisa yedu nyowani YouTube dzidziso kuti ungaisa sei iPhone muDFU modhi uye maitiro ekuita iyo DFU kudzoreredza.
Mazwi mashoma ekunyevera
Paunoita DFU kudzorera kune yako iPhone, komputa yako inodzima uye kurodha patsva yega yega kodhi yekodhi iyo yainodzora software uye Hardware kubva ku iPhone yako. Iko kune mukana wekuti chimwe chinhu chizoenda zvisizvo.
Kana yako iPhone yakanganisika chero nzira, uye kunyanya Kana ikakuvara nemvura, iyo DFU kudzorera inogona kukuvadza yako iPhone. Ini ndashanda nevatengi vakaedza kudzoreredza maPhones avo kugadzirisa nyaya diki, asi mvura yakanga yakanganisa chimwe chinhu chaitadzisa kudzoreredza kupedzisa. Iyo iPhone inoshandiswa ine diki nyaya inogona kushomeka zvachose kana DFU kudzorera ikatadza nekuda kwekukuvara kwemvura.
Chii chinonzi firmware? Uri kuitei?
Firmware ndiyo chirongwa chinodzora Hardware yeyako kifaa. Software inoshanduka nguva dzese (kana iwe ukaisa maapplication kana kurodha pasi email nyowani), iyo hodhi haichinje (Kana iwe ukasavhura iyo iPhone uye woironga zvekare zvikamu zvacho), uye iyo firmware hazvitombo shanduke - kunze kwekunge have kuzviita.
Ndezvipi zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi zvine firmware?
Zvese zvigadzirwa zvemagetsi zvine firmware! Ngatizviputsei: yako washer, dryer, TV iri kure, uye microwave zvese zvinoshandisa firmware kuronga mabhatani, nguva, uye zvimwe zvakakosha mabasa Iwe haugone kuchinja zvinoitwa ne 'pizza' kana 'defrost' bhatani pane yako microwave, nekuti haisi software - ndiyo firmware.
DFU kudzoreredzwa - zuva rese, zuva rega rega.
Vashandi veApple vanodzorera maPhones mazhinji. Tichifunga nezve sarudzo, zvachose Ini ndaizosarudza iyo DFU kudzoreredza pane yakajairwa kana kupora mode kudzoreredza. Iyi haisi yepamutemo Apple mutemo uye vamwe mahunyanzvi vangati zvakanyanyisa, asi kana iPhone iine dambudziko iro Zvinogona kugadzirisa nekumisikidza, iyo DFU kudzoreredza ine nani kugona kuigadzirisa.
Ndatenda nekuverenga uye ndinovimba chinyorwa ichi chinojekesa zvimwe zvisirizvo zviri pa internet nezve kupinda maDFU modhi uye nezvayo. Ndinokurudzira kuti ugamuchire wako wemukati nerd. Unofanira kudada! Iye zvino unogona kutaurira shamwari dzako: 'Ehe, ini ndoziva maitiro ekuita DFU kudzoreredza ye iPhone.'
Kutenda nekuverenga uye ndinokushuvira zvakanaka,